संसारकै शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपतिको कति हुन्छ तलब र सुविधा ? थाहा पाउनुहोस् – List Khabar
Home / समाचार / संसारकै शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपतिको कति हुन्छ तलब र सुविधा ? थाहा पाउनुहोस्
admin August 16, 2021 समाचार Leaveacomment 202 Views
राष्ट्रपतिको पद विश्वकै सर्वोच्च पद मानिन्छ । यो पद हासिल गर्ने व्यक्तिले अमेरि’काको संवि’धानमा उल्लेख भए ब’मोजिम विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
अमेरिकी कानु’नमा उल्लेख भए अनुसार अमेरि’की राष्ट्रपतिकोे वार्षिक तलव चार लाख डलर हुन्छ । त्यसका साथै एउटा आवास, २४ सै घण्टा स्टा’फको व्यवस्था, व्य’क्तिगत प्लेन तथा हेलि’कप्टरको सुविधा प्राप्त हुन्छ भने सवारी’का लागि विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित ‘लिमोजिन’ कारको व्यवस्था हुन्छ ।
यसबाहेक, राष्ट्रपति’लाई विभिन्न १७ वटा शीर्ष’कमा भत्ता प्राप्त हुन्छ । जसमा खाना, खाजास’हितको पचास हजार डलर बराबरको वार्षिक व्यय भत्ता, एक लाख डलर बराबरको कररहित ट्राभ’ल भत्ता, १९ हजार डल’रको मनोर’ञ्जन भत्ता सामेल हुन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति’लाई ह्वाइट हाउ’समा आवासको समेत व्यव’स्था हुन्छ । जम्मा छ तल्ले ह्वाईट हाउसमा एक सय ५ वटा कोठा छन् । जहाँ एक टेनिस कोर्ट, एक बांलिङ्ग एली, एक पारि’वारिक मुभी थिएटर, जगिङ्ग ट्रयाक, स्वीमिङ्ग पुल लगायतका सुविधा रहेको छ । घरको मर्मतसंहारका लागि वार्षिक एक लाख अमे:रिकी डलर भत्ता प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रपतिको अतिथि’का लागि व्लेयर हा’उसको समेत व्यवस्था हुन्छ ।
Previous आज राती १२ बजे देखि फेरि लकडाउन?
Next ऋणले कहिलै पिछा छोड्दैन् ? यी उपायबाट पाउनुहुनेछ छुटकारा